Ngwọta maka Business Iji | Wondershare MobileTrans
- Nyefee ọdịnaya n'etiti ngwaọrụ
(gụnyere Android, iOS, Symbian & Windows Phone; weghachi ndabere si iTunes, iCloud, Kies, blackberry na OneDrive)
Nanị Otu Mmemme Choro maka All ekwentị mkpanaaka na
Nkwado ebufe data na niile mobile ngwaọrụ-agba ọsọ ọ bụla na-ewu ewu smartphone sistemụ dị ka iOS, Android, Symbian, Windows na blackberry.
1 Pịa wuchaa niile
Bibie ihe nile ndị mgbagwoju anya ụzọ nyefee data site na otu ekwentị ọzọ. Ị nwere ike imecha ya na 1 click, n'agbanyeghị n'etiti Android, iOS, Symbian ma ọ bụ weghachi site iTunes, iCloud, Kies ma ọ bụ Blackberry ndabere. Na 1 click, ị nwere ike nyefee data n'etiti 3000+ smart igwe.
Share nnọọ mfe Thans Mgbe
Dịghị mkpa ka nchegbu banyere ihe dị iche n'etiti ekwentị gị na gị ezinụlọ ma ọ bụ enyi ugbu a. Ị nwere ike mfe ịkọrọ ọdịnaya dị ka foto na video na otu nkeji. Nbudata, converting, na-ebufe nwere ike mere n'otu oge na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ mmezi nzọụkwụ.
Otu Mmemme maka All ekwentị mkpanaaka na
Nkwado 3000+ ngwaọrụ-agba ọsọ iOS, Android na Symbian si Apple, Samsung, HTC, LG, Nokia, wdg ..